Torohevitra momba ny fanambadiana - Ny zavatra rehetra ilainao lanina amin'ny andro lehibe | Bezzia
Mankalaza ny soso-kevitrao amin'ny fomba!
Susana godoy | 13/01/2022 16:00 | fampakaram-bady
Ny fankalazana ny fangataham-panambadianao dia iray amin'ireo fomban-drazana lehibe izay mbola arahina hatramin'izao. Na dia marina aza fa tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony ny protocol. Ho fanampin'izay dia ho tian'ny mpivady foana izany, fa na izany aza dia hanome hevitra maromaro izahay mba hahafahanao manomana ny fotoana amin'ny antsipiriany tsara ny soso-kevitrao.
satria rehefa manambara ny mariazinay izahay, misy foana ny fotoana manokana ary tsy ny rehetra no latsaka amin'ny andro lehibe. Izany no ahafahantsika mankafy miaraka amin'ny vahoakantsika tsirairay amin'ireo dingana ataontsika. Dingana mahafaly izay tiana hozaraina hatrany ka izay no tsy nilaozan'ny soso-kevitrao.
1 Inona no tolo-kevitry ny tanana
2 Inona no atao amin'ny tolo-kevitra
3 Inona no omena ny mpivady
4 Hafiriana mialoha no atao alohan'ny fampakaram-bady
Inona no tolo-kevitry ny tanana
Indraindray Afaka manao olana kely isika amin'ny fanolorana tanana sy ny fotoana hangatahana fanambadiana. Marina fa samy manana ny heviny ny mpivady ka izay no tsy maintsy tanterahiny, satria tsy misy protocole toy ny taloha intsony. Manomboka amin’izany dia marina fa ny fangatahana mariazy dia fotoana iray manokana ambaran’ny ampahany amin’ny mpivady ary manao izany fanoloran-tena lehibe izany. Fa ny tolo-kevitra dia fotoana iray hafa fankalazana, fihaonana amin'ny olon-tiana izay ankalazana ny fangatahana. Efa hatry ny ela dia sarotra kokoa izany, satria ny mpampakatra no nangataka 'fahazoan-dalana' hanambady amin'ny rain'ny ampakarina. Tao no nananan’ny fianakaviana ny teny farany. Niova ho tsara kokoa ny zava-drehetra androany!
Inona no atao amin'ny tolo-kevitra
Efa mazava amintsika izany fety io, na dia kely noho ny fampakaram-bady aza. Ray aman-dreny, mpiray tampo na fianakaviana akaiky ihany Izy no hanatona azy. Noho izany, afaka manao famandrihana amin'ny trano fisakafoanana tsara ianao na manomana fety an-trano izay hankasitrahan'ny vahiny. Fihaonana io ary tsy tokony ho akaiky ny fampakaram-bady mihitsy izany, mihoatra noho ny zavatra rehetra mba hanome antsika fotoana handaminana ny iray sy ny iray tsy misy olana. Rehefa manana ny toerana ianao dia afaka handravaka azy amin'ny fomba tsotra sy tantaram-pitiavana, miaraka amin'ny voninkazo sy vazy ho an'ny fotoana. Toy izany koa, afaka misafidy sakafo somary hafa ianao, mahafeno ny filan'ny mpihinana tsirairay. Ankoatra ny sakafo antoandro na sakafo hariva dia misy ihany koa ny fifanakalozana fanomezana eo amin’ny mpivady.
Inona no omena ny mpivady
Efa fantatsika fa amin'ny fotoanan'ny fangatahana mariazy dia ny peratra no eo. Noho izany, amin'izao fotoana izao dia afaka mamela safidy hafa. Ohatra, mety ho azy izany famantaranandro mahazatra na smartwatch, cufflinks sasany, karazana zavatra angoniny, sns. Raha ho azy dia azonao atao ihany koa ny misafidy firavaka amin'ny endrika brasele, rojo na choker ary na kavina aza. Saingy mety hahagaga anao ny fitaovana sasany toy ny fehikibo tsara na kiraro. Azonao atao ny mandingana ny protocol rehetra ary misafidy hevitra iray izay manaitra azy!
Hafiriana mialoha no atao alohan'ny fampakaram-bady
Talohan'ny nilazanay fa tsy akaiky loatra ny fampakaram-bady, raha te hanao zavatra tany am-boalohany ianao ary be dia be ny drafitra. Fa amin'ny ankapobenyna tsara kokoa dia ny 4 na 6 volana eo ho eo no mandeha ny tolo-kevitra mankany amin'ny mariazy. Marina fa indraindray dia lasa misaraka kokoa izy io na mifanohitra amin'izany. Satria miankina amin'ny mpivady tsirairay izany. Na dia maro amin'izy ireo aza no tsy misafidy an'io teboka io intsony ary na dia misy aza ny fangatahana mariazy dia mandeha mivantana amin'ny fampakaram-bady. Tianao ve ny hanana ny soso-kevitrao amin'ny fomba mahazatra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » fampakaram-bady » Mankalaza ny soso-kevitrao amin'ny fomba!